FBC - Kooriyaa Kaabaa marii ollaashee haquun, kan Ameerikaas hafuu akka malu eerte
Kooriyaa Kaabaa marii ollaashee haquun, kan Ameerikaas hafuu akka malu eerte
Finfinnee, Caamsaa 8,2010(FBC)- Kooriyaan Kaabaa marii Kooriyaa Kibbaa waliin taasistu haqxe.
Marii Ameerikaa waliin gaggeessuuf beellama qabattes haquu akka maltu akeekkachiistetti.
Ministeerri Dhimma Alaa Ameerikaa gama isaatin preezdaantiin Ameerikaa Doonaald Traampii fi hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun akkaatuma karooratiin Siingaapooritti walga’anii mari’atu jedheera.
Ejjennoo ammaa Kooiyaa Kaabaa qabatteen, walga’ichi haqamuu fi haqamuu dhabuu isaarratti wanni jijjiirame akka isa hin ga’inis ibseera.
Shaakallii loltummaa Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaan naannichatti taasisaa jiraniin, mariin har’a Kooriyaa lamaan jidduutti gaggeeffamuuf ture haquushee Kooriyaan Kaabaa beeksisteetti.
Shaakalliin waraanaa loltoota biyyoota lamaanii carraaqqii nageenya naannichatti buusuuf hojjetamaa ture gufachiisera jetteetti Kooriyaan Kaabaa.
Kooriyaan Kaabaa buufataalee gabbisa nuukleeraa ishee cufuuf hojjechaa turteetti.
Eejansiin Tajaajila Oduu Kooriyaa Kaabaa beellamni marii Traampii fi Kiim qabatan hafuu akka malu gabaasera.
Tajaajilli odichaa akka beeksisetti shaakalliin loltummaa kun Kooriyaa Kaabaa weeraruuf kan kaayyeffate.
Mariin nageenyaa beellamni qabameef akka hin gufanne yoo barbaadame, akka nuti waan waadaa galle galmaan ga’aa jirru, Ameerikaan of eeggannoodhan itti deemuu qabdis jedheera.
Oduuwwan Biroo « Kooriyaan Kibbaa fi Kaabaa - Kaabi buufata yaalii misaa’elaa ishee cufuuf qophaa’aa wayita jirtu kanatti - marii geggeessuuf jedhu	Pirezdaantiin Keeniyaa seera ittisa yakka-saayibarii mallatteessan »